ALMIS EXPRESS ,WAA SHIRKAD CASRI AH
Waa xawaalad casri ah,oo ku dhisan Aqoon iyo Teknologiyad cusub , ALMIS EXPRESS
Waa shirkad ay ku bahoobeen Maal qabeeno waaweyn iyo khubaro caalami ah oo ka soo jeeda dalka Somaliland, waxaanay hormood ka tahay urur cusub oo lagu maga caabo U rurka Maal Gashatada Somaliland (Somaliland Investors Group , SIG).
ALMIS EXPRESS , waxay dhawaan xarun weyn ka furi doontaa , magaalo madaxda Soma liland ee Hargeysa , waxaanay laamo cusub ku y eelan doontaa dhammaan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba.
Khubaradan ka soo shaqeysay shirkadani,waxay ka soo shaqeeyen Hay'ado caalami ah sida, Bangiga Adduunka (World Bank) , Baanka Islaamka (Islamic Bank) ,Bangiga Horum arinta Afrika (African Devel opment Bank) iyo shirkado kale oo caalami ah.
Waxaa kale oo ay cilmiga dhaqaalaha ka soo dhigeen jaamacadaha ugu waa weyn dalka Maraykanka .Intaa waxaa dheer, aqoon yahanadani waxaa kale oo ay muddo dheer ka soo hawl galeen shirkadaha ugu weyn caalamka ee Computarada sida HP , COMPAQ ,DI GITAL, iwm.
ALMIS EXPRESS ,waxay qayb weyn ka qaadan doonta horumarka dalka ,waxayna u gu baaqaysaa dhammaan dadka degan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba, inay Saamiyo ku yee lan karaan shirkadda, wakiilana u noqon karaan halkii looga baahan yahay.
Haddaba,ka faaideyso fursaddan Qaaliga ah oo furnaan doonta waqti kooban, Dalkaag a Hooyana maal gasho , lama huraan waa caws jiilaal.
Shuruudaha qofka laga rabo, iyo wixii su'aalo ahba , kala xidhiidh shirkadda emailkee da:
A L M I S E X P R E S S
www.AlmisExpress.com (Dhawaan ayaa la furayaa)